कक्षा ८ मा अध्यनरत किशोरीले लेखिन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनछुने पत्र ! – Todays Nepal
कक्षा ८ मा अध्यनरत किशोरीले लेखिन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनछुने पत्र !
प्रधानमन्त्रीज्यू, के हामी चेलीहरू कहिले बोक्सीका नाममा कुटिन वा मलमूत्र कोच्याइन, कहिले छाउपडीका नाममा सुँगुर पनि नअट्ने गोठमा कोच्चिन, कहिले विदेशी भूमिमा बेचिन त कहिले स्वदेशमै बलात्कृत हुनैका लागि जन्मेका हौँ ? के यहाँको राज्य हाम्रा लागि चाहिँ होइन ?
आशा छ, तपाईंको सार्थक पहल र हस्तक्षेपबाट राधा दिदीले न्याय पाउनुहुनेछ । नयाबाटो
उही तपाईंकी शुभचिन्तक यूथिका खनाल कक्षा ८, मोक्षदा स्कुल, कुमारीगाल, काठमाडौं
यसकारण मान्छेको सुतेकै ठाउँमा मृत्यु हुने रहेछ ! यी हुन् निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने खतरनाक रोगहरु
BREAKING…फेरि भैरहवामा व्यवसायीमाथी गोलि चल्यो ! गोलि हान्ने बिहारी पक्राउ